စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ App အချို့ကို Play Store ပေါ်က ထပ်မံပယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Google! – AsiaApps
April 11, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ App အချို့ကို Play Store ပေါ်က ထပ်မံပယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Google!
Play Store ကတော့ Android user တွေအတွက် App တွေရယူနိုင်တဲ့အဓိက အရင်းအမြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Google ဟာ အဲ့လို Android user တွေအားထားရတဲ့ Play Store ကြီးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Download ဆွဲလိုက်ရင် ဖုန်းကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ Fake ID app ကို Play Store ပေါ်ကဖယ်ထုတ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ (အရင်တစ်ခါတုန်းကလည်း မူမမှန်တဲ့ App ၇၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို Play Store ပေါ်ကပယ်ထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။) Fake ID app ကတော့ ID Cards, Social security numbers, Passports, Diploma, Credit cards, Driver’s licenses အစရှိတာတွေကို အတုယောင် ID အဖြစ်ဖန်တီးပေးမယ့် App တွေကို Google က play store ပေါ်ကပယ်ထုတ်သွားမှာပါ။
ထုတ်ပယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google က
“အသုံးပြုသူတွေ အငြင်းပွားမှုဖြစ်စေမယ့် apps တွေ အထူးသဖြင့် Fake ID အဖြစ်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ app တွေကို ကျွန်တော်တို့ Play Store ပေါ်မှာနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ “Prank”, “For entertainment” ဆိုပြီး App တွေမှာ ခေါင်းစဉ်ခံထားလည်း ကျွန်တော်တို့ (Google) ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီရင်အရေးယူးသွားမှာဖြစ်တယ်။”
လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ Prank လို့ပြောပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်လို့မရဘူး ဆိုတာကိုတော့ Google ကပြသလိုက်ပါပြီ။ ?)
လက်ရှိမှာ Fake ID app တွေကို Play Store ပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်နေပေမယ့် Fake ID app တွေကိုဖန်တီးသူ (Developer) တွေကို ဘယ်လိုအရေးယူသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ပယ်ထုတ်နေတဲ့ကာလ အစဖြစ်တာကြောင့် Fake ID app တွေက Play Store ပေါ်မှာလက်တလောတော့ အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေဉီးမှာပါ။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။
Portrait mode နဲ့ Mention sticker Feature ၂ ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Instagram!